ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » အဘယ်အရာကိုသင်အမှန်တကယ်သိရန်လို: Chivalry ဘုရင်ဖြစ်
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: အောက်တိုဘာ. 21 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
သူမသည်စေချင်တာတွေပြီးနောက်မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ရန်ဘယ်လိုသိပြီးသွားသူတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့သောမိန်းမဖြစ်ရမှခေတ်ပြိုင်ယဉ်ကျေးမှုတိုက်တွန်းခဲ့သည်င်. သူမသည်တကယ်တော့သိပ်အားင်, သူမတံခါးများဖွင့်လှစ်ပါပြီမိန်းမအဘို့ရန်လိုအပ်သည်ဘယ်သူမိန်းကလေးအမျိုးအစားမယ်. သူမသည် pushy ရင်ခုန်စရာကမ်းလှမ်းချက်အဖြစ်ပန်းပွင့်မှာအားမနာနဲ့သူမရဲ့ဘဏ္ဍာရေးလွတ်လပ်ရေးကိုစော်ကားမှုတစ်ခုအဖြစ်ညစာစားဘို့အကျေပေးသွင်းယူချင်ပါတယ်. ဒီနေရာမှာတစ်ဦးကိုလျှို့ဝှက်ယောက်ျားင်: သင်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲပေါ်တွင်ကုမ္ပဏီ၏ CEO ဖြစ်သူထွက်ယူပြီးသို့မဟုတ်တပ်အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတတ်သောသူမိန်းကလေးတစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်, chivalry အမှန်ကစားသို့လာရန်လိုအပ်ပါသလဲ, အမြဲတမ်းသူမရဲ့ဒီပန်းချီဆရာကို.
အမျိုးသားများခေတ်သစ်နေ့ရက်ကိုကစောဒကတက်နိုင်ပါတယ်, လွတ်လပ်သောသောမိန်းမအမျိုးသမီးတိုက်ပွဲဆန့်ကျင်ပြုမူသောအမှုအဖြစ် chivalrous အစဉ်အလာ Internalize အတွင်းနိုင်ပါသည်. ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ, ဟုတ်ကဲ့, အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတော်တော်များများတူညီ, ဒါပေမယ့် chivalry အမျိုးသမီးရဲ့ဖိနှိပ်မှုပဲလုပ်လုပ်, သို့မဟုတ်အမျိုးသမီး၏လူမှုရေးမတရားမှုများ perpetuating မထင်မှတ်ဘဲမဟုတ်ပါဘူး. သာ7အမျိုးသမီးရာခိုင်နှုန်း chivalrous ပြုမူသောအမှုနှင့်တူခံစား, ထိုကဲ့သို့သောပွင့်လင်းတံခါးများကိုင်ဆောင်အဖြစ်, patronizing နေကြတယ်, Daily Mail သတင်းစာအဆိုအရ. သေး, Elite Daily သတင်းစာပေါ်ယောက်ျားတယောက်ကိုအညီ, အခြား 93 ရာခိုင်နှုန်း မိန်းမတွေဟာဒီ chivalrous ပြုမူသောအမှုအဘို့အတောင်းဆိုနေတာကြသည်မဟုတ်. Chivalrous လိုကြောင်းပိုပြီးအမျိုးသမီးတွေမျှော်လင့်သင့်တစ်ခုခုရှိပါတယ်, နှင့်ပိုပြီးယောက်ျားထည့်သွင်းသင့်ပါသည်.
ဒါကြောင့်ဖြစ်ကောင်း chivalry သေသည်မဟုတ်, ဒါကြောင့်အထင်လွဲမယ်. အဆိုပါကြေးနန်း၏ Louisa မျင်ယောက်ျား chivalrous ပြုမူသောအမှုချက်များကိုတလွဲခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ကြောက်ရွံ့သေ​​ာသဘောရှိ chivalry ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းသို့မဟုတ်မမှား signal ကိုစေလွှတ်သောကပြောပါတယ်. ဒီဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်, စာသားမက်ဆေ့ခ်ျကိုတုံ့ပြန်ရန်သို့မဟုတ်တစ်ဦး Instagram ကိုပုံကို like နှိပ်မ volumes ကိုပြောနိုင်မည်, သေးပုံအရုပ်စာအဖြစ် decipher အဖြစ်ခက်ခဲဖြစ်. ကျနော်တို့လေ့လာစမ်းစစ်မှုနှင့်ဒုတိယခန့်မှန်းကျော်တဲ့လူမှုရေးအရရှုပ်ထွေးယဉ်ကျေးမှုကိုဖြစ်နိုင်, ကချိန်းတွေ့နှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းငှါကြွလာသည့်အခါအထူးသဖြင့်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုးကိုပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးသမ္မတရွေးကောက်တင်မြှောက်သည်တဲ့အခါမှာတောင်, လူတနှင်းဆီပန်းကိုဆောင်ခဲ့လိင်အဘို့အစာမြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်စဉ်းစားတွေးခေါ်လျှင်ပင်, အမျိုးသမီးများ chivalrous င်သူတစ်ဦးနားလည်သဘောပေါက်. သူမမင်းသား Charming အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်ရန်လိုအပ်သည်သူတစ်ဦးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောမင်းသမီးင်ကြောင့် Chivalry တစ်ဦးထိခိုက်အရှအလွယ်ဆုံးသောမိန်းမ cradling သည်မဟုတ်. ဒါဟာယဉ်ကျေးတဲ့င်, တစ်မျိုးကိုလက်ဟန်ခြေဟန်နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်လေးစားမှုတစ်ခုစကားရပ်. အမျိုးသမီးများနေဆဲရက်စွဲများအပေါ်ကိုယူစေလို. Girlfriend နေဆဲနှစ်ခြိုက်ပြသစေလို. မယားများနေဆဲ pampered ခံရဖို့မျှော်လင့်.
Chivalry ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတဦးအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်တူသည်ဟုခံစားရဖြစ်စေတယ်. အဲဒီ chivalry ၏ပြုမူသောအမှုနှင့်စိတ်ကူးယဉ်မူအယာများဖြင့်သင်၏အသက်တာ၌အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဆက်ဆံပါ, သင်ကဒုတိယရက်စွဲအပေါ်တာပေါ့သို့မဟုတ်အိမ်ထောင်သက်ပါပြီရှိမရှိ 10 နှစ်ပေါင်း.
သူမ၏မွေးနေ့အပေါ်ပန်းပွင့်နှင့်အတူသူမ၏အံ့အားသင့်, Valentine Day ကိုအပေါ်သို့မဟုတ်လို့. ပန်းပွင့်ကိုပေးပို့ခြင်း, အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့တူ FTD clan ကိုပန်းစည်းထ, Romantic clichéဖြစ်မည်အကြောင်း, ဒါပေမယ့်အမျိုးသမီးတွေအချိန်အဆုံးအထိဤအမူအရာကိုချစ်လိမ့်မည်.
သူသည်သင့်ကိုအရာအားလုံးပါပဲင်သူမ၏ပြောပြပါ. သူမမျက်နှာက-To-မျက်နှာကိုပြောပြပါ. က text. တက Post-it အပေါ်ရေးပါ. ပဲသေချာသူမကမေ့လျော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်စေခြင်းငှါ.
လမ်းမနှင့်အနီးဆုံး Walk, traffic ကိုဖြတ်ကူးနေစဉ်နှင့်သူမ၏လက်ကိုကိုင်ထား. သင်သူမ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဆိုရင်အဖြစ် Feeling နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်.
a nice ညစာစားရန်သူမ၏ ယူ.. ပင်အတူတကွအိပ်ရာပေါ်ပီဇာစားနှစ်ကြာ,anice ညစာကမီးပွား rekindles. ဟုတ်ကဲ့, မိန်းမအဘို့ကားကိုတံခါးဝကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ရှေ့ဆက်လှမ်းသွား.
မမျှော်လင့်ဘဲသူမရဲ့လက်ကိုဖမ်း. သင်ကော်ဖီအဘို့အလိုင်းအတွက် TV သို့မဟုတ်နေစဉ် watch နေစဉ်သူမ၏လက်ကိုကိုင်ထားပါ. စိတ်နှလုံးအ flutter လိမ့်မယ်.
ရက်စွဲတစ်ခုရှေ့တော်၌ထိုမိန်းမသည်တံခါးကိုနှုတ်ဆက်ကြလော့, ထိုနောက်မှတံခါးဝသူမ၏လမ်းလျှောက်. ဒါကြောင့်ရုပ်ရှင်များတွင်ပြုမယ့်ဘယ်လိုင်.
check-၌ပဌနာပြု, အစားစာသားထက်. သူကသူ့ဖုန်းကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအောင်မှဦးဆောင်သင့်အသက်တာ၌အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့မလုံလောက်အရေးကြီးပါတယ်.